Dair Ghaelach Irish Whiskey abaneminyaka Oak Irish
Wake wazibuza yini ukuthi kungani iningi Scotch futhi Whisky Irish is abaneminyaka Oak Bourbon imiphongolo ubudala kusuka Kentucky noma i-oak sherry emiphongolweni kusukela Spain? Kumelwe kube nesizathu esihle kungani imiphongolo esetshenziswa ukuvuthwa nogologo Irish akakwazanga kusukela bomdabu Irish oki?
Eqinisweni kunezizathu eziningana. 500 iminyaka edlule, Ireland sahlanganiswa lasendulo e-oki. Omdala kunayo yonke kulemibhalo Kukholakala ukuthi ngesikhathi Rindoon eWest Shore ka Lough ree emfuleni Shannon. Ezikhathini Elizabethan, bekutlhogeka nokuhahela kwesihlahla se-okhi ukwakha imikhumbi ukuze IsiZulu Navy nimelana Armada Spanish. England waphendukela emasimini abo amasha e-Ireland futhi abaphundlwe nokubusa kwabo iningi etholakalayo oki ukwakha yempi. Njengoba umuntu ogama abanothando umlando zasolwandle izimbangi isithakazelo sabo emlandweni whiskey, Angikwazi thembeke ukukwazisa ukuthi ngokwesilinganiso Elizabethan Galleon ngokuphila serviceable kweminyaka eyishumi nje, Lakhiwa phezu 4,000 izihlahla kwesihlahla se-okhi ovuthiwe ezineminyaka ephakathi 80 futhi 150 iminyaka. Kwakhishwa umthetho wobukhosi wakhishwa yiNdlovukazi uQueen Elizabeth Lokuqala ukuhlubula Ireland amahlathi ukuze kuncisha Abashokobezi Irish wendawo yokukhosela lapho ngesikhathi esifanayo ukuhlinzeka i-oak esetshenziswa emikhunjini yezempi entsha. Lezi yizinto ezimbalwa nje zezizathu akukaze kube Oak ngokwanele Irish ukwenza okwanele kwesihlahla se-okhi bomdabu Irish nogologo imiphongolo ngokuba Irish Whiskey umkhakha. American nogologo iziqondiso uyifunde Bourbon kumele kuphela ngefaneleko e intombi emiphongolweni ye-oki okuyinto akakwazi ukusetshenziswa. Njengoba kungekho mithetho ezikhona mayelana Scotch nogologo nogologo Irish, sikunika i emakethe ekahle yokuzalela kulezi ebona kahle, emiphongolweni kanye kuphela esetshenziswa.
Ngokujabulisayo, Rindoon Ihlathi namanje uyasinda namuhla ogwini olungasentshonalanga yoLwandle ka Lough ree emfuleni Shannon.
Midleton Distillery sika idumela amasu amasha lukhula ngonyaka eholwa Irish Distillers 'Ubuchule Master Brendan Buckley. Omunye amaphrojekthi zabo zakamuva kuyinto Midleton imbiza olulodwa namanje whiskey usuphelile Irish Oak imiphongolo. Umuthi we-oki Irish (Njengoba kuthiwa Dar Gay Lock) okusho Oak Irish ngeLulwimi Irish is umshado ebhodweni bendzabuko solo distillates okuye ezineminyaka ephakathi 15 futhi 22 ubudala e ex-Bourbon emiphongolweni ngaphambi kokuba washiya ukuvuthwa ukuze unyaka omusha Irish Oak Hogshead emiphongolweni ukuze uyinike oyingqayizivele Irish-oak ukhuni sekugcineni.
I-Sustainable Irish Oak izihlahla engokuthuthukiswa Whisky Irish
Ballaghtobin bezindlu – Ikhaya Ukhuni Grinsell analo Dair Ghaelach
Izihlahla-oak esetshenziswa ezikhethwe ngokucophelela by Midleton sika Master Blender Billy Leighton, Master Cooper thela Buckley ENZA of nokuvuthwa Kevin O'Gorman. Ukuthatha izifundo kusukela ezikhathini Elizabethan, liyisici esiyinhloko lo msebenzi waba nokusimama Oak Irish esetshenziswa.
Kevin futhi Billy akhethiwe Izinkuni Grinsell ku Ballaghtobin bezindlu e Co. Kilkenny ukuhlinzeka kwe-oki ukuze lisetshenziswe yokuqala ochungechungeni oluhlelelwe virgin Irish Oak ukukhishwa eminyakeni embalwa ezayo. eziyishumi 130 nonyaka ubudala Irish Oak zazibhekwa ezikhethwe ngokucophelela bawisa ngo-Ephreli 2012.
I owagawula kwesihlahla se-okhi izingodo abangu zithunyelwa Irish Distillers Sherry cask abalingani eSpain lapho babhaliswa khona ikota Basaha ku izinti ngaphansi kokuqondisa Irish Whiskey Masters. Izinti bathunyelwa the Antonio Páez Lobato Sherry Cooperage e Jerez asenesikhathi eside ayenamanzi Sherry emiphongolweni esetshenziswa Irish Distillers. Ilungu izilaleli at ngesonto eledlule Irish Whiskey Hangout Google HQ Dublin ebuzwa ukuthi kungani waba izinkuni usike futhi ebona eSpain kunokuba Ireland?
Dair Ghaelach Whisky & The Connection Spanish
Master Cooper thela Buckley wachaza ukuthi wakhetha ukuhlala isikhathi eside esizayo Spanish Cask abalingani babo njengoba babe isipiliyoni nokuqinisekiswa kwekhwalithi ayikatholakali Irish amapulangwe amayadi angu. Nokho, akazange abakushayi kungenzeka Irish emiphongolweni ye-oki kukhiqizwa kusukela esihlahleni ukuze cask e-Ireland eminyakeni ezayo.
Ngemva iphele ngoba 15 izinyanga, izinti kwamiswa ku 48 ngu 250 litre Hogshead emiphongolweni. cask ngamunye usukela emuva kumuntu Irish kwesihlahla se-okhi esihlahleni futhi lokhu kulotshwe ebhodleleni ngalinye.
Emva ukugcwalisa, Leighton futhi O'Gorman tholakala futhi banambitha nogologo inyanga ngayinye futhi cishe ngemva konyaka, yahlulelwe ke ukuba ulinganisela kahle nje umnikelo ephelele oki Irish.
Ukuhlaziya ebonisa ukuthi kwesihlahla se-okhi Irish iqukethe amazinga aphezulu kwezinye compounds lignin esuselwe, ezifana vanillin futhi vanillic acid, futhi furfural, uma eqhathaniswa kwesihlahla se-okhi American neSpanishi. Lezi zinto zehlela okwengeziwe ukuthuthukisa nogologo vanilla, caramel kanye ushokoledi flavour, okuyizinto selitholakala ekhaleni ka Midleton Irish Oak futhi ngokuphelele silinganise ocebile classically, okubabayo Single Embizeni Namanje ukunambitha sephrofayela.
Yini Ochwepheshe Cabanga Mayelana Irish Oak ngoba Whisky Irish
Ngokusho Billy Leighton, ENkosini Blender ngesikhathi Midleton Distillery,
"Inqubo ukukhula e lwendabuko-oak Irish okwasisiza ukuba sikhangise Single Embizeni yethu Namanje Irish Whiskey isitayela ngendlela amasha; the emiphongolweni lidlulisele kakhulu ophana kakhulu ukhuni athosiwe, vanilla caramel flavour kuka kulokho esikulindele kusukela Bourbon American futhi kwesihlahla se-okhi Spanish, okuyinto sethemba abathandi nogologo bayokwazisa futhi ujabulele. "
Futhi nabo Irish Whiskey Master Billy sika nokuvuthwa Kevin O'Gorman wathi:
"Nge kabusha yamuva e ipulazi, manje kuphela lapho kuye kwaba iphila ukuba sicabangele Oak Irish e nokuvuthwa of whiskeys yethu ngenkathi iqinisekisa ukuthi zigcine kwesihlahla se-okhi kungajatshulelwa izizukulwane ezizayo. Ngemva kweminyaka eyisithupha ngiyisosha ekwenziweni, Midleton Dair Ghaelach bekulokhu uhambo ukuhlola ku lo msebenzi we-Irish nogologo nokuvuthwa futhi siyajabula ngokulinganayo futhi ube nexhala yilungu entsha ye Single yethu Embizeni Namanje Whisky umndeni Irish. "
Brendan Buckley, Global Ukuqamba Zenzele Whiskeys Umqondisi ngaso Distillers Irish, wanezela:
"Sekuyiminyaka engaphezu 30 iminyaka, Midleton Irish Whiskey iye abatshazwe ngenxa yokunikezela Distillers yayo 'ukuba ingcweti Irish nokudedela Midleton Dair Ghaelach uyaqhubeka leli siko ocebile. Ngokusebenza eduze ngokubambisana izigodi yethu ezifana Ballaghtobin, siyakwazi ukulandelela ebhodleleni ngalinye emuva esihlahleni ngamunye. Lokhu kunikeza nogologo engavamile ukuthi sithola esijabulisayo kodwa futhi bathemba nezinye aficionados nogologo babenokwesaba ngokuzokwenzeka, njengoba sibona kungekho isizathu esenza kwesihlahla se-okhi Irish akakwazi ukudlala indima ebalulekile ekukhuleni kwamangqamuzana Whisky yethu Irish e medium- ukuze eside. "
izindaba ezijabulisayo ngempela njengoba ngicabanga ukuthi singalindela ukuba ubone nogologo Irish ngokuphelele wavuthwa e Irish Oak ezinkulu eminyakeni ezayo. Mhlawumbe i-Irish Oak Green Spot e 2020?
Midleton Dair Ghaelach Cask Amandla – Manje Iyatholakala!
Bottled at amandla cask phakathi 58.1% futhi 58.5% ABV ngaphandle kokusebenzisa filtration obandayo, Midleton Dair Ghaelach itholakala kusukela ngo-Ephreli 2015 ezimakethe ezinhlanu, kuhlanganise ne-Ireland, France futhi South Africa, ngesikhathi Kunconywa ethengisa intengo mayelana € 250 per 70cl ibhodlela.
Angikaze ngiye lucky ngokwanele ukunambitha okwamanje kodwa kuzoyingeza Irish nogologo isiqondiso sethu lapho enginakho.